About Ashin Wiwekananda
Ven Ashin Wiwekananda was born on 13 February 1974 in Pyinma Village, Taung Twin Gyi Township, Magway District, Myanmar. His parents are U Bo Tay and Daw Mi Khin and he is the sixth son among seven siblings.
When he was 11-year old after finishing 4th grade, he ordained as novice monk with Village Monastery (Ywar-Oo-Kyaung) Sayadaw Ven U Sunanda as his preceptor. Under Ven U Sunanda's guidance, he studied Buddhist scriptures for 2years.
On9April 1994, he was ordained asanoble monk with Ven Chanmyay Sayadaw as his preceptor and was sponsored by Ven U Sunanda. He then studied successfully the primary, secondary and higher levels of Buddha Dhamma under the guidance of Ven Chanmyay Sayadaw and other teachers at Mahar Wi-Thu-Dar-Yone Monasteries from Yangon and Mandalay.
Afterwards, he practiced intensive Vipassana meditation at Yangon Chanmyay Yeiktha Meditation center for long time under the guidance of Ven Chanmyay Sayadaw. Then, he became meditation instructor and junior teacher with the supervision of Ven Chanmyay Sayadaw and shared his Dhamma knowledge at Yangon Chanmyay Yeiktha for 4years, Hmawbi Chanmyay Yeiktha for 2years, Pyin-Oo-Lwin Chanmyay Yeiktha for 1year and New Zealand Chanmyay Yeiktha for 5years.
On top of that, he also wrote and published4Dhamma Books named - Asate & Phyay Say, Apyit Shar Thu, Tayarkhan Bal Thu Lal and Sakarlay Ta Khoon.
Now Shin Vivekananda resides as abbot at Chanmyay Yeiktha Meditation Centre Singapore and teaches vipassana meditation and abhidhamma to the devotees.
May Buddha Sassana be shining like the sun. May all beings be free from all kind sufferings.
Ven, Ashin Wiwekananda (Burmese and Pali)
အရှင်ဝိဝေကာနန္ဒကို မကွေးတိုင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ပျဉ်းမရွာတွင် အဖ-ဦးဘိုတေ၊ အမိ ဒေါ်မိခင်တို့မှ ၁၉၇၄-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃-ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖွါးမြင်တော်မူပါသည်၊ ညီအကို မောင်နှမ ခုနှစ်ယောက်တွင် ခြောက်ယောက်မြောက် ဖြစ်ပါသည်။
အရှင်ဝိဝေကာနန္ဒသည် အသက် ၁၁-နှစ်အရွယ် ၄-တန်း အောင်မြင်ပြီးသောအခါ ရွာကျောင်းတွင် ဆရာတော် ဦးသုနန္ဒကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရှင်သာမဏေပြုပြီး လောကုတ္တရာ အခြေခံစာပေများကို သင်ယူခဲ့ပါသည်၊ ထိုနောက် ၁၃-နှစ်အရွယ်သို့ ရောက်သောအခါ ရန်ကုန်မြို့၊ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်း၊ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသို့ ဆရာတော်ဦးသုနန္ဒမှ အပ်နှံခဲ့ပါသည်၊ ရဟန်းပြုသောအခါ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ၁၉၉၄-ခုနှစ် ဧပြီလ ၉-ရက်နေ့တွင် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်း၌ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပါသည်။
ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်း၊ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် သံဃာတော်များထံတွင် စာပေများ သင်ယူရင်း တရားများလည်း အားထုတ်ခဲ့ပါသည်၊ ထိုမှတပါး ဗဟန်း၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးကောဏ္ဍည၊ တိပိဋက-ယောဆရာတော်ဘုရားနှင့် စာချသံဃာတော်များ အထံတွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးမြို့၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံကျောင်းတိုက်၊ စည်ရှင်ကျောင်း၊ ဆရာတော်ဦးအဂ္ဂဥာဏာဘိဝံသနှင့် စာချသံဃာတော်များ အထံတွင်လည်းကောင်း အခြေပြုမူလတန်း၊ ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီး၊ ဓမ္မာစရိယ စာပေများကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်တွင် ရန်ကုန်၊ ချမ်းမြေရိပ်သာကျောင်း၊ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး လက်အောက်တွင် ၀ိပဿနာတရားများကို အချိန်များစွာ ပွါးများအားထုတ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာတွင် ၄-နှစ်ခန့် ၀ိပဿနာ တရားများကို ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်ငယ်တပါးအနေဖြင့် ၀ိပဿနာ တရားများ ပြောဟောပြသခဲ့ပါသည်၊ ထိုနောက်တွင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး လမ်းညွန်သာသနာပြု စေလွတ်မှုကြောင့် မှော်ဘီ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်းတွင် ၂-နှစ်၊ ပြင်ဦးလွင် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်းတွင် ၁-နှစ်၊ နယူးဇီလန် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာတွင် ၅-နှစ် ၀ိပဿနာတရားများ ဟောပြောပြသခဲ့ပါသည်။
ထိုမှတပါး အဆိပ်နှင့်ဖြေဆေး၊ အပြစ်ရှာသူ၊ တရားခံဘယ်သူလဲ၊ စကားလေးတခွန်း စသော တရားစာအုပ်များကိုလည်း ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်ကာလတွင် စင်္ကာပူ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံးလျှက် သတိပဋ္ဌာန် ၀ိပဿနာ တရားစခန်းများ ကျင်းပလျှက် ဟောပြောပြသလျှက် ရှိပါသည်။